Kugadzira uye yekutengesa chinzvimbo cheChina chemabhizimusi ekusonesa indasitiri indasitiri muna 2020
Kugadzira uye yekutengesa chinzvimbo cheChina chemuchina wekusona indasitiri indasitiri muna 2020
Kugadzira kwemuchina wekuChina wekusona nekutengesa, kupinza kunze kwenyika zvakaderera muna 2019
Kudiwa kwemachira nemidziyo yezvokupfeka (kusanganisira michina yemachira nemichina yekusonesa) zvakaramba zvichidzikira kubva muna 2018. Kuburitswa kwemachina ekusona mumaindasitiri muna 2019 kwadzikira padanho ra2017, angangoita mamirioni 6.97 mamirioni; zvakakanganiswa nekuderera kwehupfumi hwenyika uye kudzikira kwekudzikira kwembatya, nezvimwe. Muna 2019, kutengesa kwepamba kwemashini ekusonesa emabhizimusi aive angangoita mamirioni e3.08, kuderera kwegore- neanenge makumi matatu muzana.
Kubva pakuona kwemazana emakambani, mu2019, makambani zana emuchina wekusona emabhizimusi akaburitsa zviuru zvina mazana masere nemakumi masere nezviuru mazana masere uye vakatengesa mamirioni 4.23 emayuniti, ine huwandu hwekutengesa-hwekutengesa hwe101.3%. Yakakanganiswa nemakakatanwa ekutengeserana eSino-US uye kudzikira kwekudiwa kwepasi rose nekumba, kuunzwa uye kutumira kunze kwemashini ekusonesa emabhizimusi ese akaderera mu2019.
1.China yemuchina wekusona wekuburitsa wakaderera, nemakambani zana achiverengera 60%
Kubva pakuona kwekuburitswa kwemuchina wekusona michina munyika yangu, kubva 2016 kusvika 2018, pasi pemaviri-mavhiri ekuvandudza emabhizimusi zvigadzirwa uye nekuvandudza kwekubudirira kweyekudzikira indasitiri, kuburitswa kwemakemikari ekusona michina yakaitika nekukurumidza kukura. Kuburitswa muna 2018 kwakasvika mamirioni 8.4 mamirioni, akakwirira kwazvo mumakore apfuura. kukosha. Sekureva kwedata kubva kuChina Sewing Machinery Association, kuburitswa kwemachina ekusona emabhizimusi munyika yangu mu2019 yaive mamirioni 6.97 mamirioni, kuderera kwegore-ne-gore kwe17.02%, uye goho rakadzika padanho ra2017.
Mu2019, iwo zana emusana musana akazara makambani emuchina akateedzerwa nesangano akaburitsa huwandu hwemamiriyoni e4,70 miriyoni emashini ekusona, kuderera kwegore-pagore kwe22.20%, kuverengera ingangoita 60% yezvose zvakaburitswa muindasitiri.
2. Musika wemuchina wekusona weChina wave kuzara, uye kutengesa kwepamba kuri kuramba kuchingova husimbe
Kubva muna 2015 kusvika muna 2019, kutengesa kwemukati kwemakemikari ekusona emabhizimusi kwakaratidza kuchinja kuri kuita. Mu2019, yakakanganiswa nekuderera kuri kudzikira kudzvinyirira hupfumi hwepamba, kuwedzera kwemakakatanwa ekutengeserana eSino-US, uye kuzadzikiswa kwakadzikira kwemusika, kuderera kwerwizi rwezvipfeko nezvimwe zvipfeko kwaderera zvakanyanya, uye kutengesa kwepamba kwemidziyo yekusonesa kwakakurumidza kunonoka kukukura kwakashata. Muna 2019, kutengesa kwepamba kwemashini ekusonesa emabhizimusi kwaive kungangoita mamirioni e3.08, kuderera kwegore-gore-kweanosvika makumi matatu muzana, uye kutengesa kwaive kwakadzikira zvishoma pane mazinga e2017.
3. Kugadzirwa kwemachina ekusona mumaindasitiri mumabhizimusi eChina zana kwadzikira, uye huwandu hwezvigadzirwa nekutengesa hwakamira pazasi.
Sekureva kwenhamba dzemakambani emuchina zana akazara anoteverwa neChina Sewing Machinery Association, kutengeswa kwemashini ekusonesa emumaindasitiri kubva kumakambani emuchina zana akazara muna 2016-2019 kwakaratidza kuchinja, uye huwandu hwekutengesa muna 2019 hwaive mamirioni 4.23 emamiriyoni. Kubva pakuona kwekugadzirwa uye yekutengesa chiyero, iyo yekugadzira uye yekutengesa chiyero chemakambani ekusonesa emashini e100 akazara makambani emuchina mu2017-2018 anga asingasviki 1, uye iyo indasitiri yakasangana yakadzora kudarika.
Muchikamu chekutanga cha2019, kuunzwa kwemashini ekusonesa emabhizimusi muindastiri kwave kwakasimbiswa, neyakagadzirwa uye yekutengesa chiyero inodarika zana%. Kubva chikamu chechipiri che2019, nekuda kwekudzikira kwemusika, kugadzirwa kwemabhizinesi kwakadzikira, uye mamiriro ezvinhu ekuti musika unopfuura kudiwa wakaramba uchionekwa. Nekuda kwekungwarira kwehukama hwemaindasitiri muna2020, mukota yechitatu neyechina ya2019, makambani akatora danho rekudzikisa kugadzirwa uye kudzikisa zvinyorwa, uye kumanikidza kwekugadzirwa kwezvigadzirwa kwakadzikiswa.
4. Kudiwa kwepasi rose uye kwepamba kwadzikira, uye kupinzwa kunze kwenyika zvakaderera
Kunze kwenyika michina yangu yekusonesa michina inotungamirwa nemashini ekusonesa emabhizimusi. Mu2019, kuburitswa kwemakemikari ekusona emabhizimusi kwakaverengerwa kungangoita 50%. Yakakanganiswa nemakakatanwa ekutengeserana eSino-US uye kudzikira kwekudiwa kwepasi rose, chiyero chegore rose chemidziyo yekusona mumaindasitiri mumusika wepasi rose chakadzikira muna 2019. Maererano nedata kubva kuGeneral Administration of Customs, iyo indasitiri yakatumira kunze kwe3,893,800 maindasitiri. michina yekusonesa mu2019, kuderera kwe4,21% gore-ne-gore, uye mutengo wekutengesa kunze kwaive US $ 1.227 bhiriyoni, kuwedzera kwe0.80% gore-ne-gore.
Kubva pakuona kwemaindasitiri ekusonesa muchina, kubva muna2016 kusvika 2018, huwandu hweanosona michina yekunze uye kukosha kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika zvakawedzera gore negore, zvichisvika zvikamu makumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemadhora US $ 147 miriyoni muna 2018, hunhu hwakanyanya mumakore apfuura. . Mu2019, iyo yekuwedzera huwandu hwekunze kwemashini ekusona emachina michina yaive 46,500 mayuniti, iine mutengo wekupinza wemamirioni 106 emadhora ekuUS, kuderera kwegore-pagore kwe8.67% uye 27.81% zvichiteerana.